Man United vs Liverpool, Chelsea vs Inter, Arsenal vs PSG & Faah-Faahinno Ku Saabsan Kulamada Waaweyn Ee Maanta & Caawa Saqda Dhexe Laga Ciyaari Doono ICC Cup. | Raadgoob
Man United vs Liverpool, Chelsea vs Inter, Arsenal vs PSG & Faah-Faahinno Ku Saabsan Kulamada Waaweyn Ee Maanta & Caawa Saqda Dhexe Laga Ciyaari Doono ICC Cup.
July 28, 2018 - Written by admin
Tartanka International Champions Cup ayaa si xiiso leh uga soconaya meelo badan oo Adduunka ka mid ah, waxaana jira maanta kulamo aad u xiiso badan oo qaarkood la sugi la’yahay, waxaana ugu weyn kulanka dhexmari doona labada kooxood ee ugu guulaha badan England (Manchester United iyo Liverpool).
Tartanka wuxuu ka socdaa inta badan dalka Mareykanka, sidoo kale garoomo ku yaala yurub iyo Singapore ayey kulamada qaar ku qabsoomi doonaan, waxeyna taasi ka dhigan tahay in saddex qaaradood lagu ciyaarayo tartanka.
Haddaba waxaan eegi doonaa kulamada maanta jira ee ka tirsan koobka International Champions Cup:
ARSENAL VS PARIS SAINT GERMAIN:
Labada kooxood ee Arsenal & Paris Saint Germain ayaa isaga hor imaanaya koobka International Champion Cup, kulan xiiso badan ayeyna ku yeelan doonaan duhurnimadaan wadanka Singapore iyadoo Unai Emery uu kooxdisii hore wajahayo.
Gunners waxey ciyaareysaa kulankii labaad ee tartanka maadaama ay kulankii hore 1-1 la galeen waqtigii caadiga ahaa ka hor inta aysan rigooreyaal ku lumin, halka PSG uu kulankaan u yahay midkii labaad waxeyna qasaaro kasoo qaateen Bayern Munich.
Mesut Ozil ayaa kulankaan loo dooran karaa maadaama uu tababar buuxa kooxa la qaatay, sidoo kale Gunners waxey wali sugeysaa Lucas Torreira iyo Danny Welbeck oo aan kasoo laaban fasaxii koobka Adduunka.
Dhinaca kalana Kylian Mbappe, Neymar & Thiago Silva ayaa kooxda Paris Saint Germain ka maqan wali maadaama ay meelo dambe ka gaareen koobka Adduunka.
Kulanka waxaa geeska Africa laga daawan doonaa 2:30 Duhurimo
Juventus ayaa guul ku bilowday kulankeedii ugu horreeyay tartanka ICC Cup kadib markii ay 2-0 ku dileen Bayern Munich kulan ka dhacay Philadelphia. Da’yarka weerarka ah ee Andrea Favilli ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda Bavarians.
Kulankaan waa midkii 9-aad oo ay taariikhda is arkaan labada kooxood, balse waxey markii ugu horreysay is arkeen Semi Final-kii European Cup 1968.
Kooxda Benfica waxey xilligaas guul ku gaartay gurigeeda 2-0, halka ay markii la isugu yimid Turin sidoo kale guul kale ku qaadatay 1-0, nasiib wanaag 46-sano kadib ayey isugu yimaadeen Semi Final-ka Europa League 2014. Mar kale Benfica ayaa 2-1 ku badisay kulankii gurigeeda, halka 0-0 lagu kala baxay kulankii Juventus Stadium.
Labadaan kooxood laba jeer ayey horay saaxiibtinimo u kulmeen 2005 oo ay Juventus 2-0 ku badisay iyadoo laba gool ka heshay Ibrahimovic iyo Trezeguet. Halka ay barbaro 1-1 ah galeen 2012.
Kulanka waxaa geeska Africa laga daawan doonaa 8:05 Habeenimo
CHELSEA VS INTER MILAN:
Chelsea ayaa la ciyaareysa Inter kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka International Champions Cup,waana mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan tartanka.
Maurizio Sarri ayaa ka hor imaan doona kooxda uu mudada dheer kula xifaaltamay Serie A-da, Sidoo kale Jorginho ayaa la sugi doonaa sida uu bandhig u sameeyo maadaama uu kulankii Perth Glory isbaray qof walba.
Kurt Zouma ayaa dhaawac kaga maqan kooxda Blues, halka Cesc Fabregas iyo Callum Hudon-Odoi ay macquul tahay iney kusoo bilowdaan kulanka maadaama ay kulankii hore wacdaro dhigeen.
Kulanka waxaa geeska Africa laga daawan doonaa 9:05 Habeenimo
Sidoo kale waxaa jira kulamo waaweyn oo la ciyaari doono caawa saqda dhexe, waxaana ka mid ah kulanka Red Devils iyo Reds kaas oo ah kulanka loogu jecel yahay Ingiriiska, walow labada kooxood ay mid walba isku diyaarineyso oo kaliya fasalka cusub.
Magaalada Ann Arbor ayaa nasiib u yeelatay iney martigaliso kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona Jurgen Klopp iyo Jose Mourinho.
Xherdan Shaqiri ayaa kulankii ugu horreeyay ee kooxdiisa Liverpool safan kara caawa saqda dhexe, hanka kale Nathaniel Clyne ayaa u duulay England si uu u xaliyo arrimo qoyskiisa ah.
Dhinaca kale Antonio Valencian ayaa usoo duulay England si uu daaweyn u qaato, halka Anthony Martial uu isna kasoo tagay tababarka kooxda maadaama uu canug u dhalanayo.
Man United waxey rigooreyaal la isku riiqay kaga badisay Milan, halka Liverpool ay 2-1 ku dishay Manchester City.
Kulanka waxaa geeska Africa laga daawan doonaa 12:05 (Lix Saac Saqda Dhexe)
Dhanka kale caawa 2:05 (Saqda dhexe) waxaa ciyaari doona kooxaha Bayern Munich & Manchester City, waana kulan Pep Guardiola ka hor keenaya kooxdisii hore.
Halka Barcelona ay 6:05 Subaxnimo (berito) la ciyaari doonto kooxda Tottenham Hotspur.